AC Milan oo loo bandhigay laacib ay raadinaysey bishii Jannaayo! – Gool FM
AC Milan oo loo bandhigay laacib ay raadinaysey bishii Jannaayo!
Raage August 16, 2016
(Milano) 16 Agoosto 2016 – Kooxda AC Milan ayaa loogu yaboohay garab-weerarka Ajax ee Anwar El Ghazi, kaasoo ay cayrsanayeen suuq-xagaagii.
Laacib-yarahan 21-jirka ah ayay Milan doonaysay inay xilligaasi isku xoojiso balse waxba kamasoo naasa caddaanin qorshahaasi, balse haatan sida uu dhigayo webka Gianluca Di Marzio, wakiilka El Ghazi ee Jorge Mendes ayaa la xiriirirey AC Milan oo uu laacibka u bandhigay.
Weli makala cadda inay weli jirto suurtagalnimo ay camaaliqadan Talyaanigu weli doonayso El Ghazi maaddaama ay isbedeleen macallinkii iyo milkiyaddii kooxdu, balse haatan waxaa loo bandhigay laacib ay bilo yar ka hor doonayeen.
XOG: AC Milan oo heshiis la gaartey José Ernesto Sosa (Daawo farsamadiisa)